Beesha Murusade oo Muqdisho xaflad taageero ah ugu sameeysay Muungaab (sedex iyo sagaal). FIIRSO SAWIRO « AYAAMO TV
Beesha Murusade oo Muqdisho xaflad taageero ah ugu sameeysay Muungaab (sedex iyo sagaal). FIIRSO SAWIRO by Maamule b 1 of 1
964 Views Date March 21st, 2014 time 6:41 pm
Munaasabadaan lagu taageerayay maamulka cusub ee gobolka Benaadir ayaa waxaa ka qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada, xubno ka socday maamulka Gobolka Benaadir, iyadoo xafladda ay heeso guubaabo ah ka qaadeen fanaaniinta kooxda Heegan ee ciidanka booliska.
Qaar ka mid ah odoyaashii dhaqanka ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddada munaasabadda ay ahayd mid lagu taageerayo maamulka cusub ee gobolka Benaadir, iyagoo ugu baaqay maamulka cusub in uu dar dargeliyo xoojinta amniga magaalada Muqdisho.
Sidoo kale haweenkii ka hadlay kulanka ayaa yiri “Anagga kan haween ahaan diyaar ayaan u nahay in aan la shaqeyno guddoonka cusub ee gobolka Benaadir, waxaana ka qeyb qaadanaynaa dib u dhiska dalka”.
Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka Benaadir ee dhanka maamulka iyo Maaliyadda Mudane Ismaaciil Macalin Cabdi Guure oo isna kulanka soo dhaweynta ah hadal ka jeediyay ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka looga fadhiyo sidii ay u sii dar dargelin lahaayeen taageerada ay u hayaan maamulka cusub ee gobolka.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab gabo gabadii xafladda ka hadlay ayaa sheegay in maamulkiisa uu xoogga saari doono arrimaha ammaanka, nadaafadda iyo ka shaqeynta horumarinta gobolka, isagoo intaa ku daray inay bulshada ugu adeegi doonaan cadaalad iyo sinaan